ရင်နှစ်မွှာ ရဲ့ အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်အောင် မိမိုက်လွန်းနေ တဲ့ Xmue Xmue – Let Pan Daily
photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ချစ်စရောကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
သူမကတော့ ယခုမှာ အသည်းယားလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်အမှူးရဲ့ ကြွေလောက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
photo model အမႉး က ေတာ့ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေနတဲ့ photo model တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္ကို တင္ေပးေလ့ရွိတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြ အလန္းစား ဖက္ရွင္ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး ခ်စ္စေရာကာင္းလြန္း တဲ့ အၿပဳံးေလးေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမ ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ photo model တစ္ေယာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။.
ရင္ခုန္သြား ရေလာက္ေအာင္ ညိဳ႕အားျပင္းတဲ့ အလွတရားေတြ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ ဖမ္းစားလိုက္တဲ့ ရွင္ယြန္းျမတ္
ချစ်စရာ အရမ်းကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အမိုက်စား TIK TOK လေးဆော့ထား တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ဗီဒီယို
သူမ ရဲ့ လက်မောင်း မှာ တက်တူးထိုး နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး
ဆီလီကြန္ ထည့္ထားတယ္ ဆိုၿပီး ေဝဖန္ေနၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြ ကို အမွန္အတိုင္း ေျပာျပလာတဲ့ မမေဆာင္း